Qarax xoogan ayaa caawa Gil Gilay gudaha Magaalada Bosaaso | maakhir.com
Qarax xoogan ayaa caawa Gil Gilay gudaha Magaalada Bosaaso
Bosaaso:- Qarax xoogan ayaa caawa Gil Gilay magaalada Bosaaso ee xarunta Gobolka Bari, qaraxaasi ayaa waxa la sheegay in lala beegsaday Gaadhi ay wadeen Booliska Magaalada Bosaaso xili ay ku jireen hawlgal balaadhan oo ay ku sugan yaan Amaanka magaalada Bosaaso, goortii qaraxaasi dhacay ayaa waxa ay rideen Ciidamadu rasaas xoogan oo ay kaga jawaabayaan Qaraxaasi.
Dad goob joogayaal ah ayaa saxaafada u sheegay inuu qaraxaasi ahaa Mab-gacmeed kaasi lagu tuuray Baabuur ay la socdeen ciidanka Booliska ee magaalada Bosaaso, qaraxaasi ayaa la cadeeyay inuu dhawaac ka soo gaadhay hal ruux oo goobtaasi ka dhawaa, kagadaal goortii uu Mab-kaasi dhaafay Ciidankii lala beegsaday.
Isla markiiba ciidan xoogan oo dheeraad ah ayaa soo gaadhay goobtii ay Masiibadaasi ka dhacday iyaga oo isku gadaamay waxayna baadhitaana xoogle ka wadaan goobihii ku dhawaa agaasi iyaga oo la sheegay inaanay ilaa haatan cidna loo qaban Qaraxaasi.
Maamulka Puntland ayaa ilaa iminka wax jawaab ah ka soo saarin qaraxaasi caawa dhacay iyaga oo sheegay inay wadaan hal gal baaxadle oo ay ku soo qabanayaan dadkii falkaasi maleegay, waxay sheegeen saaraakiisha Ciidanku ee Puntland inuu qaraxaasi caawa dhacay uu ahaa mid aad looga soo shaqeeyay ujeedkiisuna uu ahaa in lagu wiiqo Amaanka Dawlada Goboleedka Puntland.
Qaraxaasi caawa ka dhacay magaalada Bosaaso ayaa ah kii labaad oo noocisa oo kale ah oo ka dhaca magaalada Bosaaso, isaga oo kii ka horeeyay uu ka dhacay habeenkii dhawayd magaalada Bosaaso uu aah mid kiinay khasaare lixaadle oo ay ku dhawaacmen ilaa 7- Ruux halka 3-kalena ay ku dhinteen.
Tani waxay soo beegmaysaa xili Cade Muuse uu ku sugan yaahay magaalada Bosaaso, isaga oo la sheegay inuu uyimi sidii uu ula xajoon lahaa wafti u andacoonaysa laba Hablood uu duleedka Bosaaso lagu haysto Mudo gaadhaysa ilaa 10-maal mood.
Dhamaan xaalada guud ee magaalada Bosaaso ayaa ah caawa mid Kacsanaan laag dareemayo iyada oo ay wadooyinka joogaan Ciidamo aad u farabadan kuwaasi oo baadhitaano ka wada Gudaha Magaalada Bosaaso.
« C/laahi Yuusuf ayaa maanta soo gaadhay magaalada Baydhabo ee fadhiga Baarlamaanka Somaliya
Diyaarad aan la aqoon ujeedkeeda oo fadhiistay Deegaanka Xaydhanyaale oo ka tirsan Gobolka Sanaag »